Damac badan maku aragtay ninkaaga-Taladaan qaado - iftineducation.com
iftineducation.com – Rag Farabadan oo xaasas leh ayaa doona in ay guursadaan gabdho kale arintaas oo ah mid soo jireen ah waxaa muhiim ah in la isweydiiyo .
Maxa Horta ninyahow kugu kallifaya inaad adoo marwo wanaagsan qaba mid kale u guursato ?
Hadaba Way jiraan duruufo ama arin mar marka qaar kugu kallifaysa inaad xaas 2-aad guursato, ha yeshee waxaa jira waxyaalo badan oo wax laga qaban karo. Horta ma u sheegtey inaad la guursaneyso,su,ashas wa Maya, inteenna badan waan qarsannaa ?
Laakiin waxaa fiican inaad u sheegto, si haddii sababta kugu kallifeysa ay dhankeeda tahay ayna wax ka qaban karto aad u siiso fursad ay wax kaga qaban karto. Haddiise aya tahay duruuf aysan waxba ka qaban karin, sida dhalmo la’aan, jirro wakhti dheer ah IWM, isku day inaad ku qanciso oo iyadoo raalli ka ah aad la guursato, inkastoo ay adag tahay iney raalli marna ka ahaato, laakiin iskudey samee. Haddiibase ay dhacdo inaad la guursato horey ugu sii sheeg ama ha u sheegine, ogow iney maseyreyso kuna tala gal isbeddel weyn oo reerka ku dhaca.
MUUQAALKAN HOOSE NALA DAAWO: